Ity ny iOS 7 Beta 2 amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Androany Apple dia namoaka ny Beta faharoa an'ny iOS 7 vaovao, ary eo amin'ireo fiasa vaovao marobe, ny zava-dehibe indrindra dia ny mety hametrahana izany amin'ny iPads. Na dia handinika amin'ny antsipiriany bebe kokoa aza ireo vaovao samihafa izahay, dia azo antoka fa maro aminareo no te hahita ny fijerin'ity iOS vaovao ity eo amin'ny takelaka misy anao, noho izany dia hanolotra sary "binge" tsara ho hitanay izahay. ny fomba nanarahan'i Apple an'ity iOS 7 vaovao ity amin'ny efijery iPads.
Ny efijery hidin-trano dia izay efa fantatsika avy amin'ny iPhone, fa miaraka amin'ny vokatra parallax izay miharihary kokoa amin'ny efijery lehibe kokoa an'ny iPad. Ary farany, ny fampandrenesana dia mandray ny efijery iray manontolo, fa tsy ny ridao mampihomehy izay nanananay tao amin'ny iOS 5 sy 6. Ho hitantsika ny fampahalalana mitovy amin'ny amin'ny iPhone, ao anatin'izany ny toetr'andro na dia tsy misy fampiharana toy izany aza amin'ny iPad. Ny Control Center dia misy fanaraha-maso mitovy amin'ny an'ny iPhone afa-tsy ny jiro (tsy misy flash ao amin'ny iPad), fa hafa kosa ny fandaharany.
Ao amin'ny solaitrabe Springboard ny kisary fampiharana Clock vaovao, izay, toy ny amin'ny iPhone, dia mampiseho ny fotoana tena izy amin'ny tanana faharoa mihetsika. Ny rindranasa iray izay tsy misy amin'ny iPhone dia miseho amin'ny iPad: Photo Booth. Manohy ny olana mitovy aminay amin'ireo lahatahiry noforonina tao amin'ny Springboard izahay. Na dia mamela anao hamorona pejy samihafa ao anaty lahatahiry aza izy ireo amin'ny farany, dia toa mampihomehy ao amin'ny iPhone 9 ny sary masina 5 isaky ny pejy, ary betsaka kokoa amin'ny iPad. Tsy azoko tsara hoe maninona no tsy avelan'ny Apple kisary bebe kokoa isaky ny pejy, manantena aho fa hanatsara izany manomboka eto mankany amin'ny kinova farany. Ny menio Settings dia mitovy endrika amin'ny iOS 6 saingy miaraka amin'ny famolavolana ny iOS 7. Azontsika atao ny manamboatra Siri amin'ny feon-dehilahy na vehivavy, saingy amin'ny fiteny sasany ihany, ary ny Espaniola dia tsy ao anatin'izy ireo.
Ny App Store dia miasa tsara kokoa amin'ny iOS 7 noho ny tamin'ny kinova taloha. Ny hafainganam-pandeha dia avo kokoa, ary ny fidirana amin'ny rindranasa novidiana dia tsy asa mandreraka intsony amin'ny fianjerana mitohy. Ity App Store ity dia nohavaozina fa namboarina ihany koa, ary miseho hatramin'ny fotoana voalohany nidiranao izany. Ny fizarana "List List" dia misy amin'ny écran rehetra, na dia mbola tsy afaka manampy rindranasa maimaimpoana aza izahay.
Mandaitra ihany koa ny sarintany, tsiranoka ary miaraka amin'ireo fanatsarana rehetra natao hatramin'ny nisehoany tamin'ny iOS 6. Tsy misy fiovana lehibe afa-tsy ny fanavaozana ny fampiharana.
Ny fampiharana Photos dia mampiditra ny fomba vaovao handaminana sary izay efa hitantsika tamin'ny iPhone. Marina fa ity rafitra vaovao ity dia mety somary misafotofoto ihany amin'ny voalohany, saingy mila zatra kely ihany. Hitako fa tena ilaina ity fomba vaovao mahita ny sariko karakarain'ny fotoana ity.
Ny rindran-kira mozika dia nandalo fanavaozana lalina. Bokotra fanaraha-maso vaovao, fampisehoana vaovao rakikira mozika. Mbola manana lesoka vitsivitsy amin'ireo rakikira voatahiry ao amin'ny iTunes Match, fa ny fiasan'ny azy dia marina kokoa na tsia.
Ao amin'ny efijery hidin-trano, rehefa milalao rakikira isika, ho fanampin'ny fanaraha-maso azontsika atao mankafy ny kanto rakikira. Hanana ny fanaraha-maso playback ao amin'ny Control Center ihany koa isika.
Ny fampiharana Photo Booth mahaliana mamela anao haka sary tany am-boalohany amin'ny alàlan'ny fakantsary eo alohan'ny iPad. Safidio ny vokatra tianao indrindra ary jereo ny valiny.
Ny mailaka dia nohavaozina miaraka amin'ireo fiasa efa hitantsika tao amin'ny iOS 7 Beta 1 ho an'ny iPhone. Ny mety ny tena ilaina tokoa ny manampy fampirimana fidirana haingana amin'ireo boaty mailaka. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy vitako ny manamboatra ny kaontiko GMail Exchange, saingy tsy haiko hoe hatraiza ny tsy fahombiazan'ny iOS 7 na GMail mihitsy.
Ny kalandrie vaovao efa hitantsika tamin'ny iPhone dia tonga amin'ny iPad. Angamba io dia iray amin'ireo rindranasa zanatany izay ny endriny tsy tiako indrindra amin'ny iPad. Toerana fotsy be loatra, endri-tsoratra kely ary safidy vitsivitsy hanasamihafa ny kalandrie. Mitohy ny fikarohana nataoko ho an'ny kalandrie iPad tonga lafatra satria ity application ity dia tsy mameno ahy amin'izao fotoana izao.
Ny GameCenter dia toy ny iPhone fa lehibe kokoa. Bug kely izay mahatonga ny anarako tsy mifanaraka amin'ny andalana iray. Ary ny fampiharana Lahatsary izay amin'izao fotoana izao Tsy azoko atao ny milalao ny tranomboky zaraiko, na dia mahita ny horonan-tsary miaraka amin'ny fonony sy ny mombamomba azy aza izy ireo.
Izany dia fijery ankapobeny sy haingana amin'ny iOS 7 vaovao ho an'ny iPad. Hodinihinay ireo vaovao lehibe, ka araho hatrany sao tsy hahita na inona na inona ianao.
Fampahalalana bebe kokoa - Inona no vaovao ao amin'ny iOS 7 Beta 2: Siri, Messages, Voice Notes ary bebe kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ity no iOS 7 Beta 2 amin'ny iPad
Mangataha fanontaniana, azoko atao ve ny mametraka an'ity beta ity amin'ny iPad nefa tsy mpamorona?
Araka ny hitako tamin'ny internet, azonao atao ny manavao hatrany fa tsy mamerina amin'ny laoniny.
Miarahaba, azafady azafady azafady azafady ny dingana hametrahana an'ity BETA 2 ity amin'ny iPad nefa tsy mpamorona? Manana iPhone 5 aho izay tsy te-hiaina "BETA", ratsy kokoa noho ny nivoahany ho an'ny iPad raha te hanandrana amin'ny iPad 2. Misaotra betsaka mialoha ho an'izay afaka fiaraha-miasa.
Tutorial miaraka amin'ny antsipiriany rehetra efa misy: https://www.actualidadiphone.com/como-instalar-la-beta-de-ios-7-sin-ser-desarrollador/
tarehy dia hoy izy:
Nohavaoziko fotsiny izany tamin'ny fikarohana ny IPSW mifanaraka amin'ny maodeliko iPad an-tserasera. Omenao ao amin'ny iTunes izy hanavaozana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra 'Shift' raha mampiasa windows ianao ary misafidy ilay rakitra.
Avy any no anaovany izany aminao.
Tena ilaina ny manavao azy io ary tsy mamerina amin'ny laoniny, satria raha tsy izany, ny fananana iOs7 dia hilaza aminao fa tsy mpamorona ianao ary tsy maintsy hamerina amin'ny laoniny ny kinova farany an'ny iOs6 ary hanavao ny iOs 7
Mamaly an'i cararca
Salama: manosika ahy hametraka azy amin'ny iPad-ko haha
Raha ampidiniko dia beta ho an'ny iPad Wifi + GSM izany, sa tsy izany?
Zahao ity lahatsoratra vao navoakanay ity https://www.actualidadiphone.com/como-instalar-la-beta-de-ios-7-sin-ser-desarrollador/
Nametraka iOs7 tamin'ny iPad 3. Nanomboka mandeha tsara aho, saingy misy fotoana izay tsapako fa mila mamerina azy io indray aho satria nianjera. Fa rehefa velominao io dia mivoaka ny paoma ary rehefa afaka kelikely dia maty indray. Raha mifandray amin'ny tamba-jotra elektrika izy io dia manao izany mandritra ny fotoana tsy voafetra. Izaho dia efa namerina tamin'ny laoniny indray ny iOs 6 ary namerina azy ary ilay zavatra mitovy no nanjo ahy.
Tao amin'ny tranokala natolotra be dia be no nanoratana ahy ho mpamorona; tonga lafatra amin'ny iPhone ny zava-drehetra fa amin'ny iPad dia banga ny efijery ary mainty ny sary famantarana; tsy milaza na inona na inona momba ny tsy maha-developer fa tsy mamela ahy handrindra azy koa. Raha atotaly dia niverina tamin'ny iOS6 aho. Aiza izy ireo no nanandrana nanampy ahy saingy tsy afaka mamaha izany izahay ... misy hevitra ve? Misaotra betsaka
Manavao ary aza avereno jerena. Na mety ny olana dia ilay rakitra ipsw izay alainao.
Ataoko izany, havaozina ... Nosintomiko tamin'ny tranokala 3 samihafa; Avy aiza no ampiakaranao azy ireo? Mieritreritra an'izany mivantana avy any Apple aho, sa tsy izany? MISAOTRA
Toy izany koa no mitranga amiko, azonao atao ny manamboatra azy, iPad 2
Eny, tsy maintsy niverina tany amin'ny iOS 6.1.3 aho, namerina tamin'ny laoniny (miaraka amin'ny fananganana orinasa) ary manavao indray ny iOS7 beta ary mandeha tsara 😉
Ary niasa ho ahy ny nomaniny ho solon'izay, any dia mivarina izy io rehefa mamerina ilay kopia
Ny kopian'ny iOS 7 dia tsy azo averina amin'ny iOS 6. Tsy haiko raha milaza izany ianao.
Ny kopian'ny ios 6.1.3 ao amin'ny ios 7 dia miraikitra ao amin'ny maznada dia lasa mainty sy fotsy
Aza mampiasa ny backup; taorian'ny fanavaozana ny iOS7 dia namboariko ho iPad vaovao. Kapoaka nefa io ihany no làlana ...
Amin'ny iPad-ko dia tsy mahazo AirDrop aho, misy mahalala ve ny antony? Amin'ny iPhone-ko dia misy izany. fiarahabana
Modely inona? Mifanaraka amin'ny 4 sy Mini ihany
Paulo Velasco dia hoy izy:
Ah, izany no olana, ny ahy 3, misaotra anao nanadio ny fisalasalana.
Mamaly an'i Paulo Velasco
Ny ipad 2 nataoko farany tamin'ny iOS 7 fa tsy mihoatra ny efijery fotsy sy ny sary mainty ary mijanona izy io ary miverina tampoka eo amin'ny efijery mainty misy sary fotsy, tsy hitako izay hatao, tsy Avelao aho hamerina azy io. Ampio D:
Miverena amin'ny iOS 6, ampandehano ny fitaovanao ary havaozy amin'ny Beta indray
Jaaarrrlll dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko. Vahaolana?
Mamaly an'i Jaaarrrlll
Avereno hiverina amin'ny iOS 6 ary avy eo manavao miverina amin'ny iOS 7
Nohavaoziko tamin'ny mini iPad aho ary rehefa vonoiko sy andramako ny mamerina azy indray dia miseho ny sary famantarana ny paoma fa tsy avy eo. Nametraka indray ny iOS 7 amin'ny fitaovana misy ahy aho ary tsy raikitra izany, inona no hataoko?
Tonga amin'ny iPhone maimaimpoana amin'ity taona ity ny Age of Empires